Zack Snyder ၏တရားမျှတမှုအဖွဲ့က LEGO Justice League များကိုမည်သို့တိုးတက်စေပုံ
31 / 03 / 2021 31 / 03 / 2021 ရော့ Paton 1769 Views စာ0မှတ်ချက် 76085 Atlantis ၏တိုက်ပွဲ, 76086 Knightcrawler ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုက်ခိုက်မှု, 76087 Flying Fox: Batmobile Airlift Attack, ၈၅၃၇၄၄ Knightmare Batman ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ, Batman, ဆိုက်ဘာ, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, မြဝတီ, က Superman, အဆိုပါ Flash ကို, Wonder Woman
Zack Snyder ၏တရားမျှတသောအဖွဲ့သည်ပိုမိုစွဲမှတ်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်များကိုဖန်တီးပေးသောကြောင့်ရလဒ်ကိုများစွာတိုးတက်စေပါသည် Lego တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်သတ်မှတ်။
၎င်းသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှသောဖြစ်ရပ်များဖြစ်ခဲ့ပြီး Zack Snyder မှ ၂၀၁၇ နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ထုတ်လုပ်မှုအလွန်ကာလအတွင်းသူ၏ Justice League ရုပ်ရှင်ကိုစွန့်ခွာစေခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ပြီးဆုံးခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ထပ်တိုးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများဖြစ်သည်။xtra အဲဒါကို။ ထို့အပြင် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သူ၏အပြည့်အဝအမြင်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရာတွင်ဤလေးနာရီကြာတရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်၏ဖော်ပြချက်သည်အခြေအနေနှင့်အဓိပ္ပာယ်အသစ်သုံးမျိုးအားဖော်ပြခဲ့သည်။ Lego မူလကလေးနှစ်အကြာဖြန့်ချိအစုံအဖြစ်စတုတ္ထယခင်က - သက်ဆိုင်တဲ့ Lego အစုံ
ဒါရိုက်တာတစ် ဦး သည်ရုပ်ရှင်တစ်ကားတွင်ရိုက်ရန်ဒုတိယအခွင့်အရေးရရန်ခဲယဉ်းသကဲ့သို့၎င်းသည်အတူတူပင်ဖြစ်သည် Lego အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုအနည်းဆုံးတစ် ဦး ကလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ရသူတစ် ဦး အနေဖြင့်လည်းဘဝတွင်ဒုတိယအခွင့်အရေးရလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, ကြှနျုပျတို့ကိုယျ့ကိုယျကိုတှေ့ရှိရသောအရှိဆုံးပုံမှန်မဟုတ်သောအချိန်ကာလအတွင်း - ဖွယ်ရှိ Warner Bros လွယ်ကူချောမွေ့သော '' Snyder Cut ကိုပြန်လည်လည်ပတ်လိုစိတ်ရှိခြင်း - ကျွန်တော်တို့သုံးခုကိုကြည့်နိုင်သည် DC Comic Super Heroes အစုံအလင်ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက် ၂၀၁၇ တွင်အသစ်စက်စက်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအလင်းရောင်ဖြင့်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကို 2017 ခုနှစ်တွင်မှားသွားလေ၏
76085 Atlantis ၏တိုက်ပွဲ, 76086 Knightcrawler ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုက်ခိုက်မှု နှင့် 76087 Flying Fox: Batmobile လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု လွန်ခဲ့သည့်လေးနှစ်ကတရားရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ပြဇာတ်ထုတ်ပြန်မှုမတိုင်မီထွက်ပေါ်လာခဲ့သည် Lego အစုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပါအဝင်လုပ်ခဲ့ကြသည် Brick Fanatics။ ဇာတ်ကား၊ ဇာတ်ကောင်နှင့်ဇာတ်လမ်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်မျှတမှုများစွာရှိသည်မှာတရားမျှတမှုရှိသည်။ Lego ပရိတ်သတ်များသည်လျစ်လျူရှုမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ပစ္စည်းမှအဆက်ပြတ်ခြင်းနှင့်အတူတူပင်အခြေအနေတွင်တူညီသောအခြေအနေတွင်ကြုံတွေ့နေရသည်။
၎င်းသည်ထူးခြားသောအမှောင်ထုနှင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစိတ်ဆင်းရဲဖွယ်ဗားရှင်းအချို့၏နောက်ကျောတွင်ဖြစ်သည် Batman အဆိုပါ DCEU ၌တည်၏။ ငါတို့မှာကောင်းတဲ့စုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ် Lego နှင့်အတူချည်နှောင်ဖို့ဖြန့်ချိအစုံ Batman Superman: လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်တုန်းကတရားမျှတမှုအရိပ်အမြွက်ပြောခဲ့ပေမယ့်အဲဒါဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ အဆိုပါရုပ်ရှင်တစ်စိတ်ဆင်းရဲ, ဖောင်းရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်၏ပြဇာတ်ရုံနှင့် ပတ်သက်၍ မျှော်လင့်ချက်များသည်တူညီသောနိမ့်ကျသည်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုများသည်နောက်ပိုင်းတွင်ညံ့ဖျင်းပြီး၊ အစုံလိုက်များကိုသူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ သုံးစုံထဲကအနည်းဆုံးနှစ်ခု - 76086 Knightcrawler ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုက်ခိုက်မှု နှင့် 76087 Flying Fox: Batmobile လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု - အမှန်တကယ်ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များအဖြစ်အကျိုးစီးပွားကျင်းပခဲ့တယ်။ ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဇာတ်ကောင်သို့မဟုတ်ဇာတ်လမ်း၏အသိပညာကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်ဗဟိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိရိယာအဖြစ်ခိုင်မာသောလူကြိုက်များသောရုပ်ရှင်မရှိခဲ့ပါ Lego ဖန်တီးမှုစင်ပေါ်မှာသူတို့ကိုယ်သူတို့အဘို့အ fend ထားခဲ့တယ်။
ဘယ်မကောင်းဘူး သူတို့ကနေဒါနီးကပ်စွာအပေါ်အောက်ပါခဲ့ကြသည်မသာ Batman က Superman အစုံ, အ Lego တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်အစုံကိုလည်း The ၏ The Year 2017 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် Batmanဘယ်အချိန်မှာ Lego Batman Dark Knight နှင့်သက်ဆိုင်သောရုပ်ရှင်သည်အလွန်စိတ်ရှုပ်သွားသည် Lego အစုံ။ ထိုအနက်ရောင်နှင့်အလွန်မှောင်မိုက်သောမီးခိုးရောင်အုတ်များဖုံးလွှမ်း။ သေလုမြောပါးသောအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆက်နွယ်နေသည့်တရားရေးအဖွဲ့ချုပ်သုံးခုသည်ထင်ရှားစွာဖုံးကွယ်ထားခြင်းခံရပြီးပုံမှန်မဟုတ်သောပုံပန်းသဏ္miniာန်များစုဆောင်းထားသည့်အသေးစားစုဆောင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်မေ့ပျောက်ခံရဖွယ်ရှိနေသည်။
သို့သျောလညျး, ငါတို့ဒီမှာသုံးခုစလုံးကိုစဉ်းစားရန်အသစ်သောမျက်စိနှင့်အတူ 2021 ၌ရှိကြ၏ - နှင့် - Zack Snyder သည်သူ၏ရှည်လျားသောလေးနာရီတရားမျှတမှုအဖွဲ့ဖြတ်အတွက်ဖြတ်သန်းမှုအတွက်ဇာတ်လမ်းအခွင့်အလမ်းများကိုမှကျေးဇူးတင်စကား - တစ်ဖွဲ့လုံးအများကြီးပိုပြီးဇာတ်ကောင်များနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်သတ်မှတ်ထား အတွင်း။ Snyder ၏ဗားရှင်းသည်လုံးဝပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ရှင်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်များစွာကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအလွန်သေးငယ်သောအရာများဖြစ်သည့် Warner Bros. ကို Canon သို့ယူဆောင်လာပါက DCEU အတွက်သင်တန်းပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ အမှန်မှာ Snyder Cut သည် ၂၀၁၇ ပြဇာတ်ရုံမှတိုးတက်လာသောအရာအားလုံးနှင့်အတူအသစ်သောဘ ၀ ကိုအသက်သွင်းခြင်းနှင့်အတူ၊ Lego စုံ။ ထိုအပင်အပါအဝင်ပါပဲ 76085 Atlantis ၏တိုက်ပွဲ, အစောပိုင်း 2017 ခုနှစ်နှင့် 2018 တလျှောက်လုံး 33% လျှော့စျေးမှာစင်ပေါ်မှာထိုင်နေဆဲရောင်းရန်အတွက်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား set ကို။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော Zack Snyder ၏ Justice League နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောနှင့်တိကျသောကိုးကားချက်များမပါရှိပါ။ လုယူသောသူနောက်လိုက်လိမ့်မည်.
တစ် ဦး ထက်ပိုသော rounded Aquaman
စိတ်ပူစရာမလိုပါ၊ Jason Momoa သည် Zack Snyder ၏တရားရေးအဖွဲ့ချုပ်တွင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ဖြစ်နေသော်လည်းသူ၏ Arthur Curry သည်သူ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှအကျိုးကျေးဇူးများရရှိခဲ့သည် (သူ၏တစ်ကိုယ်တော် Aquaman ရုပ်ရှင်မတိုင်မီသတ်မှတ်ထားသည့်အချိန်တွင်) ။ မိခင်သေတ္တာသုံးလုံးအနက်မှတစ်ခုအားကာကွယ်ရန်တာ ၀ န်ပေးသည့်အတ္တလန်တာများအတွက်လည်းအလားတူပင်ပြောနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည် Steppenwolf နှင့်တွေ့ဆုံမှုနှစ်ခုစလုံးတွင်ဖန်သားပြင်အချိန်ပိုရှိသည်။ သူတို့တွင်အင်္ဂလိပ်စကားသံဝိုင်းဖြင့်ထုတ်လွှင့်ထားသောလိုင်းအနည်းငယ်ပင်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် Amber Heard ၏ Mera သည် Snyder Cut အတွက်လည်းလက်ခံသည်။
76085 Atlantis ၏တိုက်ပွဲ နေဆဲ classic Lego set (တည်ဆောက်စရာများစွာမရှိပါ) သို့သော် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တရားရေးအဖွဲ့ချုပ်သည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာနှင့်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောသေးငယ်သောရုပ်ပုံများကိုထည့်သွင်းရုံမျှဖြင့်သာတိုးတက်သည်။
2017 ပြဇာတ်ရုံ၌ Steppenwolf သည်မိခင်သေတ္တာကို၎င်းအားစောင့်ရှောက်သူများထံမှပြန်လည်ရယူသည့်အစီအစဉ်၏နောက်ဆက်တွဲဗားရှင်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ သို့သော် Aquaman နှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတို့အတွက်အပိုထပ်ဆောင်းမြင်ကွင်းများ - Steppenwolf နှင့်ဆက်ဆံသည့်အခါ ပို၍ ထင်ရှားသောနောက်ဆုံးမြင်ကွင်း - ပေးသည် 76085 Atlantis ၏တိုက်ပွဲ အရင်ကထက်အကြွေးအနည်းဆုံးနည်းနည်းပိုများတယ်။ တတိယအကြိမ်တွင်ထိုငွေပမာဏကိုသင်မည်မျှဝယ်သင့်သနည်း။ ကောင်းပြီ၊
ကြင်နာပါ Batman နှင့်နှောင့်အယှက်လျော့နည်း Flash
76086 Knightcrawler ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုက်ခိုက်မှု ၎င်းသည်လွန်ခဲ့သောလေးနှစ်ကထွက်ပေါ်လာသည့်အခါစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် (သို့သော်သူပုံမရိုက်ရသေးသည့်ပုံတစ်ပုံတည်းသာဖြစ်သည်) သို့သော် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်တရားရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ပြဇာတ်ရုံအတွင်း Knightcrawler ၏နိဒါန်းနှင့်အသုံးပြုမှုသည်စိတ်ပျက်ခဲ့ရသည်။ ကအနိုင်နိုင်ဘာမှလုပ်ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ ၂၀၂၁ ခုနှစ် Snyder Cut of Justice League တွင်ကားကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ယခုအချိန်အထိဖြစ်နိုင်သည်။ Batman အရိပ်ထဲမှာနေထိုင်ပေမယ့် Snyder ကြိုက်တဲ့အရောင်ဖျော့ဖျော့အရောင်ကသူ့ ဦး ဆောင်ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ကစားစရာအရုပ်တွေကိုထိခိုက်စေတယ် - Justice League မှမည်သည့်တံခါးသည် ၀ င်လာသည်ကိုဘယ်လိုမြင်သနည်း။
သို့သော်ကားမှာ p အဖြစ်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်နေဆဲဖြစ်သည်art ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသို့အတိအကျနှစ်နာရီမှာကြီးမားတဲ့နှင့်တိုးချဲ့စစ်တိုက် sequence ကို၏။ ၎င်းသည်အပိုရိုက်ကူးမှုအတွက်၊ အမှတ်အသားဖြစ်သည့်ကားထဲတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အခန်းကဏ္ for အတွက်ပိုမိုအမှတ်ရခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်ပြောခြင်းကဲ့သို့အဆိုးမြင် (သို့သော်များသောအားဖြင့် Super Heroes အစုံနှစ်မျိုးလုံးတွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည် DC နှင့် Marvel), ကထည့်သွင်းစဉ်းစားနှင့်အတူနည်းတူအရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ် 76086 Knightcrawler ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုက်ခိုက်မှု အခု ဒီအစုတွင်ပါဝင်သည် Batman Flash နှင့်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးတရားရေးအဖွဲ့ချုပ်နှစ်ခုစလုံးတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာသည်။ ငါတို့မှာကြင်နာတတ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ Bruce Wayne ရှိတယ်Batman သူကသူကပိုပြီးနွေးထွေးစွာနဲ့လေးစားမှုတရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်မှစုဆောင်းသူများနှင့်စကားပြော။ ဤအတောအတွင်း Ezra Miller မှ Barry Allen / Flash သည်ရုပ်ရှင်၏ရုပ်ပြကယ်ဆယ်ရေးအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်းအနည်းငယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ (ဥပမာအားဖြင့်မနက်ခင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်မရှိတော့) နှင့်သူ၏ဘင်အက်ဖလက်ခ်နှင့်သူ၏ဆက်ဆံရေး Batman ပိုပြီးသင့်လျော်သည်။
ဇာတ်ကောင်နှစ် ဦး စလုံးသည်သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမှန်ကန်သည်။ သူတို့၏နည်းလမ်းများဖြင့်ပုံပြင်ကိုများစွာအထောက်အကူပြုသည်။ Flash သည် ၂၀၂၁ ရုပ်ရှင်၏အထွတ်အထိပ်တွင်အလွန်နိဒါန်းနှင့်သိသာထင်ရှားသောအခိုက်အတန့်ရှိသည်။ Batman ဇာတ်ကောင်မင်းသားပြက်ရယ်ပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးယေဘူယျအားဖြင့်အခြားသူများအတွက်လူရှုပ်မှုနည်းသည်။ လူတိုင်းကိုအတူတကွစုစည်းစေခြင်း၏သူ၏အခန်းကဏ္ it's သည်သူခံစားခဲ့ရသည်မှာသူခံစားခဲ့ရသည်မှာ၎င်းသည်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်အဖြစ်ရှုမြင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ပြဇာတ်ရုံ၌ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလွန်ကြီးမားသောအဆင်မပြေမှုဖြစ်သည်။ ဤအရာနှစ်ခုလုံးအတွက်တိုးတက်မှုသည်သူတို့၏အသေးစားပုံစံပုံစံများကိုသင်ကြည့်သောအခါသင်ပိုမိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်မှုသို့ဘာသာပြန်ပေးသည်။
အရိပ်ထဲက Steppen '
ညံ့ဖျင်းသော - အမည်ရှိပါဝင်သောဇာတ်ကောင်များအတွက်အတူတူပင်ဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည် 76087 Flying Fox: Batmobile လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု, particularly ရုပ်ရှင်၏ရန်။ ကျန်တဲ့အစပိုင်းသုံးခုထဲမှာတရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူအမှားကြီးကြီးဖြစ်တဲ့ Steppenwolf ပါ Lego ယခုသူ၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်စသည့်အဓိကစရိုက်များအပြင်သူ၏ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိပုံပန်းသဏ္theာန်အားပြန်လည်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောသူ၏ဇာတ်ကောင်၏ ပိုမို၍ ဖွံ့ဖြိုးပြီးသော arc မှအကျိုးကျေးဇူးများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သူ၏အလွန်တရာကြီးသောအရွယ်အစားနှင့်ခံစားနေရသည်မှာ ပို၍ ကြီးမားသောခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Lego ဒီဇိုင်းသည် 2021 ဗားရှင်းအတွက်ပိုမိုတိကျသည်၊
ရုပ်ရှင်၏အဓိကလူကြမ်းအဖြစ်သူအနေဖြင့်သူဘာလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်ပိုများလာသည်။ သင်ကသူ့ကိုအနိုင်ရချင်နေတုန်းပဲ၊ ဒါပေမယ့် Zack Snyder ၏ဗားရှင်းကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်သူ၏သက်ဆိုင်မှုကိုသင်နားလည်ပြီး၎င်းကိုထိုအရာများနှင့်လည်းပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းမှာ ၇၆၀၈၇ တွင်သူ၏ပါဝင်မှုကြောင့်အတူတကွစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်သူတစ် ဦး ချင်းစီ၏မြင်ကွင်းများကို ပို၍ စိတ်ဝင်စားသည် Lego အစုံအမှတ်ရစရာနည်းလမ်းများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၁ ရုပ်ရှင်တွင်ပါသောဇာတ်လမ်းပြောပြရန်အတွက်အထောက်အထားဖြစ်ပြီး၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သောနေရာတွင်ပိုမိုခိုင်မာသောချိတ်ဆက်မှုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာကိုဖန်တီးရန်သော့ချက်ဖြစ်သည် Lego အစုံ။
Cyborg အတွက်လည်းတူညီသည်။ ၂၀၂၁ တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်၏အကောင်းမြင်သုံးသပ်ချက်များသည် Cyborg ၏ပိုမိုနက်ရှိုင်း။ ပို၍ အရေးပါသောအခန်းကဏ္onကိုအာရုံစိုက်သည်။ မိမိအ backstory သူနှင့်အတူထွက် fleshed ဖြစ်ပါတယ်artသူ၌ရှိနေသောအရည်အချင်းများကိုရှင်းပြနေစဉ်၊ သူသည်ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံး၏အဓိကအခန်းကဏ္isတွင်ရှိပြီး၎င်း၏အထွတ်အထိပ်တွင်အဓိကအခန်းကဏ္ role မှပါဝင်သည်။ 2017 ၏ Cyborg အဓိပ္ပာယ်မရှိသောနှင့်အလွန်ရံကစားသမားခဲ့ဘယ်မှာ, 2021 ရဲ့ Cyborg ရှေ့နှင့်အလယ်ဗဟိုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကောင်၏ဤဗားရှင်းအသစ်ကိုယူခြင်းဖြင့်သင်အကူအညီမရနိုင်ပါart မိမိအသို့ဝင်တော်မူကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပိုမိုလေးစားရန် Lego minifigure ပုံစံ, 76087 အတွင်းသူ၏နေရာအဖြစ်သာ။ ကြီးမြတ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဆက်စပ်မှုသယ်ဆောင်။
တွင်လည်းပါဝင်သည် 76087 Flying Fox: Batmobile လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုBatfleck ၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနည်းပါးသောဗားရှင်းသည် Snyder's Justice League ၏တတိယမြောက် (သို့မဟုတ်ဆsix္ဌမဖြစ်ပါသလား) ဒုတိယပုံသဏ္ဌာန်ရှိသည်။ Wonder Woman သည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံး၏သူရဲကောင်းဆန်ဆန်ပုံဖော်သောဇာတ်ကောင်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဘယ်ကြောင့်သူမ၏အခန်းကဏ္thisကိုဒီ 2021 ရုပ်ရှင်များတွင်အနည်းဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်နှင့်သူမ Exposition နှင့်အတူတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သူကပြောသည်ခံရကြောင်း, part သူမကစားသည်မှာဇာတ်လမ်းနှင့်လက်တလောလှုပ်ရှားမှုနှင့်၎င်းဓားနှင့်သူမအားကာကွယ်ရန်အဓိကကျသည် Lego minifigure ပါဝင်လာပြီး Steppenwolf ကိုရင်ဆိုင်ရတာအဆင်ပြေပါတယ်။
အဆုံးမှာတော့၊ Lego သူသည်အပြာရောင်နှင့်အနီရောင်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့်အသင်းကိုတည်ဆောက်ခွင့်ပေးသော Superman သည် ၂၀၁၇ ပြဇာတ်ရုံ၏တရားဇရပ်ဖြတ်ပိုင်း၌သူ၏အသွင်အပြင်နှင့်အညီတိကျသည်။ အခြားအရာအားလုံး 76087 Flying Fox: Batmobile လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု (နှင့်အမှန်ပင် 76085 Atlantis ၏တိုက်ပွဲ နှင့် 76086 Knightcrawler ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုက်ခိုက်မှု), ဇာတ်ကောင်များထံမှသူတို့လှည့်ပတ်ပျံသန်းအလွန်ကြီးမားသော, ဝေလငါးပုံသဏ္vehicleာန်ယာဉ်သည်, တရားမျှတမှုအဖွဲ့ချုပ်၏အသစ်ဖြတ်အတွက်ရုပ်ရှင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပုံကိုမှသိသိသာသာမှန်သည်။ သို့သော် Superman သည် ၂၀၂၁ သူ၏အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် / ငွေရောင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ရန်တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်သည်။
ဒါဟာစိတ်မကောင်းစရာပါပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက Joss Whedon (မင်္ဂလာပါ၊ Superman? 'itchy' ။ Sigh) သင်မသေသည့်ပြန်လည်ရေးသားခြင်းကိုပယ်ဖျက်ခြင်းမှအကျိုးများစွာရရှိစေသည့်နောက်ထပ်ဇာတ်ကောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခုတော့သူ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်ထပ်နက်ရှိုင်းစွာနဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုတွေပေးနေပြီဖြစ်ပြီးသူဟာအဆုံးမှာကစားရမယ့်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္hasကနေပါ ၀ င်နေပြီးအရေးယူမှုအားလုံးကိုခိုးယူစရာမလိုပဲ။ The Lego အရာအားလုံးကိုအတူတကွချိတ်ဆက်ဖို့အနက်ရောင် -suited စူပါမင်းမင်းအဖွဲ့မှအုပ်စုသည်မှားသွားမည်မဟုတ်။ #ReleasetheSnyderCut, #ReleasetheBlackSuitedLEGOSuperman ကောဘယ်လိုလဲ။
Zack Snyder သည်သူ၏တရားရေးလိဂ်၏နိဂုံးကိုအပြီးသတ်ရန်ပြန်လာနေကြောင်းသိသောအခါအဆုံးတွင်နောက်ထပ်မြင်ကွင်းအချို့ထပ်ထည့်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့သည်၊ BatmanApocalyptic Post-Apocalyptic ကမ္ဘာကြီး၏ 'knightmare' ရူပါရုံ။ ဤမြင်ကွင်းကိုဖန်တီးရာတွင် ၂၀၂၁ တရားရေးအဖွဲ့သည်မတော်တဆနှင့်အတော်အတန်သိသိသာသာလေးပုံတစ်ပုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည် Lego ၎င်း၏ပတ်လမ်းသို့ set - 2018 ရဲ့ 853744 Knightmare Batman ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစုံ။
ဒီအဓိကအားအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်နေစဉ် Batmanအတွက်မူရင်းအမြင် Batman v Superman (၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ထူးထူးဆန်းဆန်းထွက်ပေါ်လာသည့်ကြားမှ) သည် Joker ကဒ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည် Zack Snyder ၏ Justice League ၏အနာဂတ်အနာဂတ်အဖြစ်မှန်သို့ကောင်းစွာစုဆောင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ် 2018 × 1 tile သည်အယူအဆပေါ်တွင်အခြေခံထားသောအရာဖြစ်နိုင်သည် art သို့မဟုတ်ရုံပျော်စရာပါဝင် Lego တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုဖြစ်သောအုပ်စုသည်၎င်းသည် ၂၀၂၁ ဇာတ်လမ်းသို့တိုက်ရိုက်ချည်နှောင်ခြင်းဖြင့်မင်နီဂျက်သုံးခုကိုအသစ်မမျှော်လင့်ဘဲဆက်စပ်မှုအသစ်ပေးသည်။
Zack Snyder ၏ Justice League မှမည်သူမဆိုသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အမှားအယွင်းများကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေသည်ဟုမည်သူမဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသင့်သည်။ Lego အစုံ။
2017 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိသောသုံးခု - 76085 Atlantis ၏တိုက်ပွဲ, 76086 Knightcrawler ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတိုက်ခိုက်မှု နှင့် 76087 Flying Fox: Batmobile လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု - နှင့်သူ့ဟာသူ ap တွေ့သောစတုတ္ထအစုံart ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 2021 Knightmare တွင်ပုံပြင်၏ဤဗားရှင်းအသစ်၏ Batman Accessory Set, ဒီဇာတ်ကောင်နှင့်ဇာတ်လမ်းအတွက်နောက်ထပ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုပေးထားဒီ Justice League ၏ဗားရှင်းအသစ်ကြောင့်။
ရုပ်ရှင်သည်ပြီးပြည့်စုံသောအရာမှဝေးကွာနေဆဲဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ပြသခြင်းထက်များစွာပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအဓိကကျသောအရာအားလုံးကိုအတူတကွစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ p မှာarticular, ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ချင်းစီကိုထပ်မံစူးစမ်းလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်များကိုပြသသည့်အချိန်တိုးမြှင့်မှုသည်သက်ဆိုင်မှုရှိသည် Lego သူတို့ကနောက်ကျော 2017 ခုနှစ်တွင်ရုပ်ရှင်၏ပြဇာတ်ရုံဖြတ်နှင့်အတူမရသောဆက်စပ်မှုနှင့်အခြေအနေတွင်သတ်မှတ်။
ပိုပြီးအားကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုချိတ်ဆက်မှုနဲ့ဖန်တီးနိုင်တယ် Lego အစုံတိုင်းမှာခေါ်ဆောင်သွားသည်ဆိုပါစို့ Lego ပရိတ်သတ်ရဲ့စုဆောင်းကစား, ပြသရန်သို့မဟုတ်ပြသရန်။ ၎င်းသည်တစ်ခုချင်းစီအတွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Lego Justice League သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်သူတို့ကြည့်ခဲ့သည့်ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ (အားလုံးသည်အနည်းဆုံးအားဖြင့်လက်ရှိအချိန်တွင်) အလယ်တန်းစျေးကွက်အပေါ်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စျေးပေါ.
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ သူတို့သည်သင့်ကိုတည့်တည့်ခေါ်ဆောင်သွားသည် LEGO.com ကျွန်ုပ်တို့လုပ်အားအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ရန်ပုံငွေပေးသည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သာပေးဆပ်ပါရန်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
← LEGO ဖောင်ဒေးရှင်းသည် UK ရှိလူမှုရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်း၍ အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာကလေးငယ်များကိုထောက်ပံ့သည်
LEGO NASA Ulysses Space Probe VIP ဆုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် →